Izizathu ezi-5 zokuba kutheni ubona i-11: 22-Intsingiselo ye-1122
Ubukhokelwa apha ukuba ubusoloko ubona uphawu lwe-1122 ephindaphindayo ebomini bakho. Ndiyathemba ukuba indalo iphela ityhila umkhondo kwindlela yakho ekulungeleyo kwesi sigaba kuhambo lwakho lobomi. Umendo wakho unokuziva ungaqinisekanga, kodwa uyakhunjuzwa ukuba awuwedwa xa ubona u-1122 okanye u-11: 22, kwaye ungaya phambili ngokukhuselekileyo ngesantya sakho.
Gcina ukhumbula ukuba umyalezo woMdali unokuhanjiswa ziingelosi kunye nezikhokelo zomoya ukukuqinisekisa ukuba ukwindawo elungileyo ngexesha elifanelekileyo. Ukuba uziva ungaqinisekanga nakweyiphi na indawo ebomini bakho, ingelosi engu-1122 ngumyalezo ovela kuThixo wokukhuthaza ukuba usendleleni elungileyo, kwaye uzakulunga njengoko ujolisa ingqalelo yakho iingcinga ezilungileyo kwizisombululo oko kuyakuqhubela kwinto ebaluleke ngakumbi kwindlela yakho.
Uyakhumbula ukuba iingcinga zakho zokuyila zizicwangciso zendalo yakho kobu bomi. Njengayo nayiphi na inkqubo yokwakha, udinga isicwangciso okanye uyilo lokukhokela kunye nokubonwa ngoncedo lwakho ukuze ubone ukuba indalo yakho iya kujongeka njani xa igqityiwe. Njenge, iingcinga zakho ziyiplani yobomi bakho . Xa usazi uyilo lobomi bakho, unokwazi ukuba ngoku ubenolwazi ngeengcinga zakho ezixhobisayo ngendalo. Nangona kunjalo, ukuba ungazi kakuhle ujolise kwinto ongayithandiyo ngesiqhelo, uya kudala izinto ongazifuniyo.
Ngesi sizathu, uyaqonda ukuba unakho ukuyila ikamva lakho xa ucinga ngento oyifunayo kumzuzu wakho wangoku. Ke, ngokwenza umzamo ongaguquguqukiyo wokucinga okuqinisekileyo kunye nokubonisa iimvakalelo ezintle, unokutsala amava amahle ebomini bakho. Ekugqibeleni, uthatha isigqibo sokusebenzisa ngononophelo ixesha lakho kunye namandla akho ukugxila kwizinto ezibaluleke kakhulu kuwe.
Ngolu lwazi olunzulu, uqala ukuziva uzithembile, kuba uyakhumbula ukuba yonke into ihlala ikusebenzela, kwaye uyakholelwa ukuba indalo iphela isebenza ngasemva ukuze ikuncede-nokuba awunako ukuyibona ngokwasemzimbeni.
Kumfanekiso omkhulu, intsingiselo yokomoya kunye nenani le-1122 inxulumene nokukhula kunye nenkqubela phambili, kwaye uMdali ufuna ukuba ukhumbule ukuba uku Uhambo lokuziphuhlisa kunye nokwandisa . Uhambo lokufumanisa isiQinisekiso sakho seNyaniso, kwaye unokholo ekugqibeleleni kweSicwangciso soMdali esenzelwe wena. Xa uthatha inyathelo elilandelayo, themba ukuba indalo iphela iya kutyhila okuseleyo.
Kuhambo lwakho, kunokubakho izizathu ezininzi zokuba kutheni ubona ipateni yenombolo 1122, kwaye kubalulekile ukuba wenze isigqibo ngemiyalezo yeengelosi, kwaye ulandele isikhokelo sakho ngokumamela ukuqonda kwakho ukuba kuthetha ntoni na u-1122 kuwe. Ukukunceda ngamanyathelo alandelayo, nazi iintsingiselo ezintlanu zokomoya zika-1122 kunye nezizathu zokuba uqhubeke ubona ingelosi engu-1122 kuyo yonke indawo.
Intsingiselo yokuqala ye-1122: Nika amandla iXesha lakho eliDlulileyo
Xa ubona ukulandelelana kwamanani okuphindwayo kwe-1122, uyakhunjuzwa ukuba ubomi bakho bangoku benziwa kwimemori yexesha lakho elidlulileyo. Xa ukhumbula isiganeko esadlulayo, yimemori okanye ingcinga eyenzeka kumzuzu wakho wangoku ebangela imvakalelo ngokunyakaza okunamandla okukunika amandla, okanye kukunciphise amandla.
Yenza iinkumbulo ezikomeleza
Ngenxa yokuba iinkumbulo kunye neemvakalelo zithwala ukungcangcazela okunamandla, uyaqonda ukuba xa unezinkumbulo eziqhubekayo kunye neemvakalelo ezilungileyo eziqhubekayo, uya kutsala abantu kunye neemeko ezinokuthelekiseka okuqinisekileyo kwimpilo yakho yangoku. Kule mbono, yakho ukukhunjulwa rhoqo kunye neemvakalelo ezingapheliyo zexesha elidlulileyo ziya kutsala amava amnandi ngakumbi kubomi bakho bangoku , kwaye ngenxa yoko, oku kuya kukuxhobisa ukuba wakhe ikamva eliqinisekileyo.
Njengomzekelo, xa uhlala ukhumbula ixesha elimyoli elikwenza uzive uxabisekile, ingqondo nomzimba wakho ziya kuphinda zidale ezo mvakalelo zombulelo kumzuzu wakho wangoku, kwaye ke, uya kutsala abantu abaninzi kunye neemeko ezininzi eziza kukwenza uzive uxatyiswa ngakumbi ebomini bakho namhlanje. Ngokuphathelene noku, uyakuyichaza idlulileyo njengeyona izele luxabiso. Ukuphendula, iimvakalelo zakho zoxabiso zigcina ixesha lakho elidlulileyo liphilile kwimbono elungileyo, kwaye likunika amandla okuqhubeka ngokuzithemba kuhambo lwakho lobomi.
Nangona kunjalo, xa uhlala ukhumbula ixesha elikukhathazayo elikwenza ukuba uzive unenzondo, ingqondo nomzimba wakho ziya kuphinda zidale ezo mvakalelo zenzondo kumzuzu wakho wangoku, kwaye ke, uya kutsala abantu abaninzi kunye neemeko ezininzi eziza kukwenza uzive inzondo ngakumbi ebomini bakho namhlanje. Kule meko, uya kuchaza ixesha lakho elidlulileyo njengelinye elinenzondo. Ukuphendula, iimvakalelo zakho zenzondo zigcina ixesha lakho elidlulileyo liphila ngendlela engeyiyo, kwaye oko kukunika amandla okwenza inkqubela phambili ekulungeleyo.
Gcina engqondweni, iingcinga ezingalunganga, ezinje ngokugxeka kunye nokuziva unetyala, zinee-vibration ezinamandla eziphantsi ezikwenza buthathaka kwaye zingabi namandla kumgangatho wengqondo, weemvakalelo, wokomoya, kunye nomzimba, kwaye zilibazise inkqubela yakho ebomini. Kwelinye icala, iingcinga ezintle, ezinje ngokuxabisa kunye nokuqonda, zinee-vibrations ezinamandla ezomeleleyo kwaye zikomeleza. Ngenxa yoku, uyayiqonda loo nto ngalo lonke ixesha unememori yokucinga okuqinisekileyo, uya kuba namandla , Kwaye unokuziqhagamshela kwiindlela ezahlukeneyo zamandla aqinisekileyo anokukwazisa phambili ukuzaliseka kobomi bakho.
Phinda uthethe igama lakho elidlulileyo
Njengoko ujonga umfanekiso omkhulu, uyaqonda ukuba indlela ojonga ngayo ixesha elidlulileyo kukutolika kwakho okwenzekileyo, kunye nokutolika kwakho kwexesha elidlulileyo kunokukunika amandla okanye kukunciphise. Ngale ndlela uqondayo, uyavuma ukuba unamandla okutshintsha umbono wakho wexesha elidlulileyo kwaye ngenjongo yokudala iingcinga ezikomeleza, kunokuba zikwenze buthathaka.
Ngamanye amagama, uyazi ukuba awukwazi ukutshintsha okwenzekileyo kwixesha elidlulileyo, kodwa uyaqonda ukuba ungayitshintsha indlela ophendula ngayo kwinto eyenzekileyo ebalini lakho, kwaye ngenxa yoko, unokuphinda ubhale igama lakho elidlulileyo. Ke, endaweni yokugxeka okwadlulayo ngokudana okwangoku, eyona nto iphambili kukutshintsha indlela ojonga ngayo, kwaye ujonge elidlulileyo njengethuba lokukhula komntu. Njengomzekelo, endaweni yokuzixelela ukuba ulixhoba lemeko ethile, unokuzixhobisa kwaye uthi uyintshatsheli eyoyise imiceli mngeni kwaye yaphumelela.
Eyona nto ibaluleke kakhulu, nokuba uvela phi kwaye nokuba injani imeko yakho, uyaqonda ukuba awukwazi ukulinda umntu ukuba akusindise. Okona kubalulekileyo kukulungela kwakho ukwamkela nokuxolela elidlulileyo kwaye uthathe uxanduva lokuqhubela phambili ubomi bakho.
Ngokwamkela oko wenza konke okusemandleni akho ngento onayo , uzinika isipho sokuzamkela nokuzithanda. Uyayikhumbula loo nto Onke amava ayesisipho esikulethe kweli nqanaba lendlela yakho . Ukusuka koku, ungadlulela kwinqanaba elilandelayo kuhambo lwakho. Oku kuqonda kungunobangela wenguqu yakho, kwaye olu tshintsho lubeka indlela yakho eluxolweni- kwaye ekugqibeleni inkululeko.
Lilonke, xa ubona u-1122, uyakhunjuzwa ukuba ulonwabo lwakho luxanduva lwakho. Uliqhawe kwibali lakho, kwaye njengegorha, unikwe amandla okwenza igama kwakhona ngembali yakho kwaye ukhokele ubomi bakho ngendlela efanelekileyo . Oku kuthetha ukuba uyaliqonda kwaye uyalihlonipha ixesha lakho elidlulileyo kwaye ulijonge njengelitye lokunyathela ukukunceda uye phambili.
Khumbula njalo, xa uqhubeka, uyakhula .
Intsingiselo yesi-2 ye-1122: Isipho seHlabathi ngeNgcinga yakho
Inhlanganisela yenani le-1122 sisikhumbuzo sokuba unxibelelwano kunye namandla angabonakaliyo endalo. Kukho amandla kaThixo okudala angena engqondweni yakho, kwaye Lo mandla angcwele nguMdali okunika amandla kwaye akhuthaze ngezimvo . Xa ucinga kwaye uyila ngalo mkhosi ungcwele, usebenzisa umbono wakho ukubonakalisa isiQinisekiso Sokwenyani sakho- onguMthombo kaThixo-ngaphakathi kuwe. Ngejelo lengcinga yakho, unamandla kaThixo okwenza izisombululo ezintle kwilizwe lakho.
Kubomi bakho bangoku, izimvo zakho zivela kwenye inqanaba. Xa ukhetha ukubamba izimvo ezithile engqondweni yakho, umfanekiso owenzayo engqondweni yakho uza kudala iimvakalelo oziva ngaphakathi komzimba wakho, kwaye ke, ezi mvakalelo ziya kuphuma amandla aya kutsala abantu abathile kunye neemeko kuwe.
Ngale nto uyiqondayo ngokupheleleyo, uyenza inqaku lokudibanisa umbono wakho oqinisekileyo kunye nokushukuma okuphezulu kweemvakalelo zokuziva ulungile, ukuze ukwazi Sebenzisa amandla akho okudala ukutsala abantu abaqinisekileyo kunye namava ukuxhasa umbono wakho , endaweni yeemvakalelo ezingakhiyo kunye neemvakalelo ezitsala abantu abangafunekiyo kunye namava angaxhasi umbono wakho.
Ngesi sizathu, xa ulungelelanisa umbono olungileyo kwaye uhlala ucinga ngawo ngeemvakalelo ezikhuthazayo, uya kutsala abantu abanomdla kunye neemeko ezinokukunceda uguqule umbono wakho ube yinyani ebonakalayo. Unoko engqondweni, ukuba injongo yakho kukwenza imveliso entsha ukusebenzela iimfuno zabantu, uya kukhokelwa kubantu abathile kunye neemeko zokusebenzisana eziza kukunceda ufumane isisombululo esikhuthazayo kuyilo lwakho oluqaqambileyo.
Ke, xa ubona u-1122, uyakhunjuzwa ukuba ujolise ngenjongo kwaye wakhe umfanekiso oqinisekileyo wento oyinqwenelayo engqondweni yakho. Endaweni yokugxila kwinto engafunekiyo, Sebenzisa onke amandla akho okudala ukugxila kwinto oyifunayo . Khumbula, yonke into eyenziweyo kubomi bakho bangoku yayikade ingumbono owenziwe engqondweni yomntu omnye.
Ngomfanekiso-ngqondweni wakho, vumela ihlabathi likubone oyinyani kwindalo yakho enobuchule. Kuba italente yakho sisipho soMdali kuwe, kubalulekile ukuba uyikhumbule loo nto usisipho esikhulu ehlabathini .
Intsingiselo yesi-3 ka-1122: Gxila kuHlumo
Ukubona u-1122 ngokuphindaphindiweyo ebomini bakho ngumyalezo womoya wokujolisa amandla akho kunye nokujonga umbono wakho, umnqweno, okanye injongo, kunye Thatha amanyathelo ukuzalisekisa. Ngeli xesha, ingqalelo yakho egxile kubalulekile; kukukhanya okuqaqamba kwindawo ethile yobomi bakho ukuze ubone izinto ngokucacileyo kwaye uthathe amanyathelo aphefumlelweyo kwinkqubela phambili nasekugqityweni.
Uyayiqonda into yokuba xa ujolise ngokupheleleyo kwizicwangciso zakho ozifunayo, uza nezimvo ezintsha ezinxulumene nenjongo osele unayo. Kugxilwe ekuvumela ukuba ufezekise eli nqanaba lokuhamba koyilo 'kummandla.' Kwaye xa uku-zone, uyazi ukuba ukucinga malunga nexesha elidlulileyo kunye nokukhathazeka ngekamva ziziphazamiso eziya kuvala ukuhamba kwakho ngoku. Ngenxa yoku, uyakuqonda ukubaluleka kokunikela ingqalelo yakho yonke kumzuzu wangoku ukuze ufumane ukuhamba kwezimvo ezokulungiselela okulandelayo. Ngamafutshane, isigaba sakho sobomi esilandelayo sixhomekeke kugxininiso lwakho ngoku .
Ukongeza, xa ujolise kwinjongo enye ngexesha, uyaqonda ukuba unokucokisa iinkcukacha ezibalulekileyo kwaye ugqibezele umsebenzi ngokukhawuleza kunokuba uzame ukuphatha imisebenzi emininzi ngaxeshanye. Uyayiqonda ukuba ayibhekiseli kowona msebenzi mkhulu; imalunga nokwenza owona msebenzi wakho ubalulekileyo ukufezekisa iziphumo ezilungileyo ekugqibeleni.
Njengoko ulola ingqwalaselo yakho, uyakuqonda oko Ukugxila kudala ukwanda . Xa ujolisa kokulungileyo, udala okuhle ngakumbi. Kwaye xa ujolisa kwizisombululo, wenza ezinye izisombululo . Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba ucinge malunga neengcinga ezakhayo ukuze ukwazi ukutsala amava amahle ebomini bakho.
Nokuba kwenzeka ntoni na macala onke, indlela ophendula ngayo ihlala ikukhetho lwakho. Kuba uhlala ungumyili weengcinga kunye nezenzo zakho, indlela oziphatha ngayo kutshintsho lwangaphandle iyakwenza ukuba usebenze ngokwenyani. Ukugcina amandla aqinisekileyo engena ebomini bakho, uqala ukuphuhlisa ukhetho olunokuphendula ngokuzithemba kunokuba usabele ngokungakhathali.
Ekugqibeleni, umhlaba wakho uhlala uvela kwaye uyanda kuba indalo yinkqubo eqhubekayo. Xa ubona u-1122, sisikhumbuzo sokuba umhlaba wakho uchaphazeleka kuyo yonke ingcinga ocinga ngayo kunye nesenzo ngasinye osithathayo. Xa usenza iinguqu ezintle kubomi bakho, uya kubona utshintsho oluhle lujikeleza kwaye lubonakalise umva kwihlabathi lakho.
Ngokubalulekileyo, kunjalo injongo yomphefumlo wakho ukuqhubela phambili kunye noluntu kunye nokwakha ingomso elingcono . Ungumdali odibeneyo kunye noThixo, kwaye ubuchule bakho bokuyila buhlala busakha ikamva elingcono. Kwaye xa ujolise ngokwenyani kwinto oyenzayo, ukhokelwa ukuba wenze okungcono onokukwenza.
Khumbula, sisoloko sizimisele wena!
Intsingiselo yesi-4 ka-1122: Ziveze ngobuGcisa
Xa ubona ulandelelwano lwamanani u-1122, uyakhunjuzwa ukuba unokudibana ngakumbi nobunye noMdaliuyilophakathiInkukhu uvakalise okanye uxabise naluphi na uhlobo lobugcisa.
Ngolu lwazi, uyaqonda ukuba kukho iindlela ezahlukeneyo zobugcisa ubuchule obulindele ukugqabhuka emphefumlweni wakho. Enye yeendlela zokuyila ngumculo obambe amandla emvakalelo anokungcangcazela ukuphilisa amaza esandi kubo bonke ubomi bakho.
Xa usenza umculo kwelona candelo lakho lobuntu kwaye uchaza le mvisiswano, uzisa ndawonye amaqela ahlukeneyo abantu ukuba bafumane esi sipho sonyango sokuyila esivela kuwe. Ngale ndlela, ukuba uyimvumi, ungumphilisi. Ngokwenza umculo, wabelana ngengoma yomphefumlo wakho kwaye uzisa imvisiswano kunye nokuphilisa kubantu behlabathi lakho. Gcina engqondweni, ukuba awuyomculi, usenokuyiva eyakho imvisiswano yomphefumlo xa uncuma okanye ucula kunye nesingqi sengoma yakho oyithandayo.
Qaphela, ingoma emnandi inokuchaphazela kwangoko iingcinga zakho kunye neemowudi zokunyusa ukungcangcazela kwakho, kwaye ngokuyintloko uphilise ilizwe lakho langaphakathi. Xa uvale amehlo kwaye umamele umculo okunyusayo, unokuthelekelela amaza esandi somculo esanga yonke iseli yomzimba wakho ngelixa usasaza ukungcangcazela okuhle kubomi bakho bonke.
Kolu luvo, umculo ophakamisayo ubambe izitshixo kwikhemesti yomzimba wakho, kwaye uyasebenza ukuphilisa kwawo ngokusebenzisa isingqisho. Ngenxa yokuba ukubetha kwentliziyo yakho, ukuphefumla kwakho, kunye namaza engqondo akho konke okunesingqi, ungumntu onesingqisho ophendula isingqisho kunye neengoma . Nokuba uyacula, ujikeleza, uqhwaba izandla, okanye uyaxhuma, umculo uhambisa umzimba wakho ukuze ukwazi ukudanisa ngokuvisisana nomphefumlo wakho. Ithetha ukuba xa ungcangcazela uxolo kunye nemvisiswano ngaphakathi kwakho, umhlaba uya kudanisa ngoxolo nemvisiswano nawe .
Ngokubalulekileyo, naka ingqalelo xa uziva ungonwabanga nakweliphi na ilungu lomzimba wakho, kuba umzimba wakho ukukunika umqondiso osikelelweyo wokutshintsha kwaye uzilungiselele kwindlela engcono yokucinga kunye nokuba sempilweni. Njengekatala enokuthi iwele kulungelelwaniso oluvela kwimeko-bume, uyakuqonda ukubaluleka kokulungisa kunye nokulungelelanisa imitya yakho ukuze ungcangcazelise umculo odibeneyo okanye ukhuphe ukungcangcazela okuhle ukuze uphakamise owakho umoya. Eyona nto ibalulekileyo, konke ukuphilisa kukutshintsha kweentshukumo ezivela ngaphakathi kuwe .
Lilonke, intsingiselo yokomoya ye-1122 imalunga nokuzisa abantu kunye nezipho zakho zokuyila. Xa usebenzisa ingcinga yakho kwaye ubonise amandla akho okuyila ngezobugcisa- njengomculo, umdaniso, imidlalo yeqonga, ukubhala, ukwenza igadi, ukupheka, okanye obunye ubugcisa obubonwayo- ubopha abantu kunye ukubhiyozela izipho zakho zokuyila. Kwaye ngexesha elifanelekileyo, uya kwakha umanyano kwindawo yakho. Ngale ndlela, wenza eyakho indima ekwakheni indlela yendaleko eya eluxolweni kunye nobunye.
Ubunye bucinga ukuvumelanisa noMdali wakho. Kwaye khumbula, ubunye buqale njengomsebenzi wokuyila woMdali wakho xa wawudalwe kwingcinga Yakhe. Ngesi sizathu, unako ukucinga njengoMdali wakho. Kwimeko, ubuchule nguThixo osebenzayo ngawe .
Intsingiselo yesihlanu ye-1122: Yenza umbono woXolo kuBomi bakho
Ukubona i-1122 iphindaphindeka ivela ebomini bakho luphawu oluvela kuThixo lokuba wenze uxolo ngamandla okudala engqondo yakho. Uyabona ukuba kunemveliso ngakumbi ukusebenzisa amandla akho ukwakha kunye nokwenza umbono woxolo, kunokuba unike amandla akho okuphelisa nokudiliza ukungakhathali. Ngenxa yoko, endaweni yokusebenzisa amandla akho ukukhalaza, wena Sebenzisa amandla akho ukwenza izisombululo . Uyayiqonda into yokuba xa ujolisa kwizenzo zoxolo, ezinje ngokubambisana nentsebenziswano, uya kutsala izigqibo zoxolo.
Ke ngoko, njengoko uzama ukuhlala kwihlabathi loxolo, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba uxolo sele luhleli ngaphakathi kwakho, kwaye ulinde nje wena ukuba uthathe inyathelo lokuqala kwaye usebenze. Ukuba kukho ubunzima kubudlelwane bakho ekhaya, esikolweni, okanye emsebenzini, inombolo 1122 ngumyalezo wokuba lifikile ixesha loxolo, kwaye uyakhuthazwa ukuba ukhokele kwaye uphilise ubudlelwane obuthile ebomini bakho. Ngokwenza ukungaxoleli kunye nentsebenziswano, uhlakulela uxolo apho ukhoyo ngoku, kwaye uyathemba ukuba amanyathelo alandelayo aya kukuvela kamva.
Ngokubanzi, intsingiselo ye-1122 kukukhumbula ukuba uxolo lwenziwa ngumntu omnye ngexesha. Ngokudibeneyo, lilonke uhlanga lwabantu, xa umbono womanyano mkhulu kunombono wokwahlula, uya kudala utshintsho kunye nokutshintsha umhlaba wakho.
Kwiskimu esikhulu, uxolo sisiphumo sokugqibela sehlabathi lokuyila. Into ekufuneka uyenzile kukucinga ngempembelelo yakho, kuba yonke into oyenzayo inesiphumo sokungqubana, kwaye ngenxa yesi sizathu, ungumenzi wezinto ezisebenzayo . Njengokulahla ilitye elincinci elwandle echibini kunye nokudala amaqhuqhuva aphumela ngaphandle, ukungcangcazela kwempembelelo yomphefumlo wakho kuthumela ukungqubana okuhle kwihlabathi lakho liphela. Kukutyikitya kobomi bakho kuchaphazela enye. Isiphumo sakho sokuqhwitha ngumsonto ongabonakaliyo obopha iqhina lobuntu kunye .
Yintoni omele uyenze ngokulandelayo xa ubona i-1122?
Umhlaba uhlala uthumela imiqondiso yokukunceda kuhambo lwakho. Ke, xa ubona u-1122, sisikhumbuzo sokuba ungafikelela kulwalathiso lukaThixo ngokubhadula kwengqondo. Ngale ndlela, xa uphupha emini, uyatshona kwinkqubo yokubona, emva koko uthathele ingqalelo. Sebenzisa ukucinga kwakho kuyindlela yokufikelela kwisitishi apho unokufumana iingcebiso kunye nezikhokelo zikaThixo malunga nohambo lwakho lobomi oluvela kuMdali kunye neqela lakho lezingelosi kunye nezikhokelo.
Ukongeza, uyakhumbula ukuba xa uthandaza, uthetha noMdali, kwaye xa ucamngca, umamele iimpendulo ezivela kuThixo. Kule nkqubo, uyakhumbula ukuba ungumntu wokomoya onamava aphathekayo kwiplanethi yakho yekhaya.
Gcina ukhumbula, inkqubo yokuzifumanisa ngokwakho kuhambo lwakho lobomi iyaqhubeka, kwaye kuhlala kukho okungakumbi onokukufunda ngawe kunye nobudlelwane obakhayo nabanye. Ngale ndlela, intsingiselo yenombolo 1122 imalunga nokwakha ubudlelwane kunye nawe kunye nokuvisisana nehlabathi. Xa udanisa kwiimvumi zomphefumlo wakho, ukuvumelana kwakho kuhamba kubo bonke ubudlelwane bakho, kwaye kukuvumela ukuba ukhululeke kwaye ube noxolo kulusu lwakho.
Kwaye xa uqhagamshele kwaye ufumanekile ngokweemvakalelo kulusu lwakho, unokudityaniswa kwaye ufumaneke ngokweemvakalelo kwabanye. Uyabona ukuba kubalulekile ukutshata kwaye uzikhathalele, ukuze ube sisiseko sayo yonke into esehlabathini. Embindini, ubudlelwane obunothando kunye nawe buhlaziya ubudlelwane bakho nabanye .
Kwisikimu esikhulu, xa usenza unxibelelwano nabantu ebomini bakho, uyila ingoma yakho yobomi kunye nehlabathi. Ulungiselela indawo yengoma yakho mzuzu ngamnye nomntu ngamnye onendima kubukho bakho. Njengoko ufikelela ebantwini kwaye unxibelelana, kwaye uchitha ixesha elisemgangathweni nosapho kunye nabahlobo, wabelana ngomculo womphefumlo wakho kunye noluntu.
Khumbula, ingoma yakho yobomi ihlala ingumsebenzi oqhubekayo, ke kubalulekile ukuba wenze izigqibo ezizizo namhlanje ukuze wenze ingoma yakho ibe ntle ngakumbi ngomso. Kungenxa yoko le nto ukwabelana ngeziganeko zobomi kunye nokuphila ngokuvisisana nabantu abakungqongileyo kuya kuba yenye yezona zinto 'zakho' zibalaseleyo ebomini bakho.
Ngalo lonke ixesha khumbula, uphupha kwaye ungumdali, kwaye ingoma yakho yobomi yeyona myalezo unamandla owuphetheyo. Xa udlala ingoma yakho, uthumela ii-echoes zeentsikelelo kubo bonke abantu kwihlabathi liphela .
Ukucoca i-DIY: Yenza eyakho iYoga Mat yokutshiza
Iifolda zeDonga ezisezantsi eziPhezulu njengeSitishi seLaptop se-IKEA sePS
Iindlela ezili-12 zokuYila zokuNxiba iCloset yakho
Ukupheka kwamagumbi: Iingcamango ezikhawulezayo zokulungisa kwakhona igumbi lakho lokulala
Nguwo lo uMvuzo oFunekayo ukuba uyithenge eBay Area
Ungazifihla njani iingcingo zasekhaya
I-11 Space Space Closet Designs asinakufumana ngokwaneleyo
Ndizamile iFeng Shui: Ngaba imigaqo eyiNgcaciso izise kwizithembiso zabo?
Zingaphi iiRejista zoMtshato onokuthi ube nazo ngaphambi kokuba uqale ukufumana i-Side-Eye?
Ngaphambi nasemva: Le $ 7K IKEA Ikhitshi yiStunner enkulu
Ngelixa kufuneka ubize ukuseta izixhobo xa ushukuma
Musa ukutsiba le mikhwa ili-14 ukugcina igumbi lokuhlambela lakho kuMngundo
lithetha ntoni inani u-911
athetha ntoni amanani u-777
Ithetha ntoni ingelosi engu-888
Ithetha ukuthini xa ubona 555
Kuthetha ukuthini ukubona 444
Ithetha ntoni i-44
Intsingiselo ye-444 kwibhayibhile